Grate Bar, Roller & Kubereka, kamwene, Rack yemarara kupisa michina. Vagadziri nevatengesi - China Grate Bar, Roller & Bearing, Nozzle, Rack yemarara kupisa michina. Fekitori
Chigadzirwa Chigadzirwa: GRATE BAR & Roller Maitiro ekuti incineration kabati inodzikamiswa nepakati inoyerera ichibva ipapo. Iyo kabhu ine mahwendefa akati wandei akagadzirwa nesheet simbi. Ndiro yega yega iri pane inotevera ndiro. Pombi yekubatanidza yakarongedzwa kune rumwe rutivi rweplate imwe neimwe uye pombi yekubuda yakarongedzwa kune rimwe divi replate yega yega yeiyo inoyerera svikiro. Iwo mahwendefa akayambuka neuwandu hwezvinhu zvine tubular izvo zvinovhura padivi repamusoro pamahwendefa. P ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Rack Maitiro umo incineration kabati inodzikamiswa nepakati inoyerera ichibva ipapo. Iyo kabhu ine mahwendefa akati wandei akagadzirwa nesheet simbi. Ndiro yega yega iri pane inotevera ndiro. Pombi yekubatanidza yakarongedzwa kune rumwe rutivi rweplate imwe neimwe uye pombi yekubuda yakarongedzwa kune rimwe divi replate yega yega yeiyo inoyerera svikiro. Iwo mahwendefa akayambuka neuwandu hwezvinhu zvine tubular izvo zvinovhura padivi repamusoro pamahwendefa. Mhepo yekutanga ndeye ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Kutakura Maitiro umo incineration kabati inodzikamiswa nepakati inoyerera ichibva ipapo. Iyo kabhu ine mahwendefa akati wandei akagadzirwa nesheet simbi. Ndiro yega yega iri pane inotevera ndiro. Pombi yekubatanidza yakarongedzwa kune rumwe rutivi rweplate imwe neimwe uye pombi yekubuda yakarongedzwa kune rimwe divi replate yega yega yeiyo inoyerera svikiro. Iwo mahwendefa akayambuka neuwandu hwezvinhu zvine tubular izvo zvinovhura padivi repamusoro pamahwendefa. Primary mhepo iri S ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Roller Maitiro ekuti incineration kabati inodzikamiswa nepakati inoyerera ichibva ipapo. Iyo kabhu ine mahwendefa akati wandei akagadzirwa nesheet simbi. Ndiro yega yega iri pane inotevera ndiro. Pombi yekubatanidza yakarongedzwa kune rumwe rutivi rweplate imwe neimwe uye pombi yekubuda yakarongedzwa kune rimwe divi replate yega yega yeiyo inoyerera svikiro. Iwo mahwendefa akayambuka neuwandu hwezvinhu zvine tubular izvo zvinovhura padivi repamusoro pamahwendefa. Mhepo yepuraimari iri ...